Qaraxa Kismaayo : Jubbaland oo shaacisay tirada dadkii ku dhintay qaraxa - BBC News Somali
Qaraxa Kismaayo : Jubbaland oo shaacisay tirada dadkii ku dhintay qaraxa
Mareykanka oo la sheegay inuu indhaha ka dadatay warbixinta ku saabsaneyd dilka Khaashuqji
Antonio Guterres: Maamul xumada ayaa sabab u ah argagixisada
Faransiiska oo beeniyay inuu hub siiyay Janaraal Khaliifa Haftar
Posted at 17:57 13 Jul17:57 13 Jul
SAWIRRO: Saameynta ka dhalatay weerarkii Kismaayo
Halkan ka daawo sawirrada goobtii uu shalay ka dhacay qaraxii uu weerarka tooska ah daba socday ee lagu qaaday Hoteelka Madiina ee Magaalada Kismaayo.
26 ruux ayaa lagu dilay, halka 50 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Posted at 16:33 13 Jul16:33 13 Jul
Dhaawacyada weerarkii Kismaayo oo loo duuliyay Muqdisho iyo Nairobi
Radio RisaalaCopyright: Radio Risaala
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa garoonka diyaaradaha la tagay dhaawacyadaImage caption: Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa garoonka diyaaradaha la tagay dhaawacyada
Qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii lagu qaaday Hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa lagu qaaday diyaaro, waxaana loo kala duuliyay magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi, si adeegyo caafimaad oo dheeraad ah loogu sameeyo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam "Axmed Madoobe" ayaa garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulle Xassan ku sagootiyay dhaawacyada la dhoofinayay.
Wrarka ayaa intaas ku daraya in dhaawacyada Nairobi loo duuliyay ay yihiin 7 qof.
In ka badan 50 ruux oo weerarka ku dhaawacmay ayaa waxaa ku jiray dad ajaanib ah oo u dhashay dalka Shiinaha.
Weerarka lagu qaaday Hoteelka oo ay ku dhinteen 26 qof ayaa lasoo afjaray saaka aroortii, waxaana mas'uuliyaddiisa dusha u ridatay Al-Shabaab.
Dhaawacyada qaarkood ayaa loo dhoofiyay NairobiImage caption: Dhaawacyada qaarkood ayaa loo dhoofiyay Nairobi
Posted at 11:05 13 Jul11:05 13 Jul
Jubbaland TVCopyright: Jubbaland TV
Axmewd Maxamed IslaamImage caption: Axmewd Maxamed Islaam
Maamulka Jubbaland oo sharraxaad ka bixiyay khasaarihii ka dhashay weerarkii qaraxa ku billowday ee Jimcadii lagu qaaday Hoteel ku yaalla magaalada Kismaayo ayaa sheegay in qaarkood ay ahaayeen dad heystay dhalashooyinka dalal ajaanib ah.
Maxaweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam "Axmed Madoobe", oo shir jaraaid ku faahfaahiyay dhacdada ayaa xaqiijiyay in 26 ruux oo halkaas ku geeriyootay ay ku jireen 9 ruux oo qurbaha ka tagay.
Sida uu Axmed Madoobe sheegay, dadkaas ayaa kala ahaa:
3 qof oo Soomaali Kenyan ah.
1 qof oo Soomaali Canadian ah.
1 qof oo Soomaali British ah.
2 qof oo Soomaali American ah.
3 qof oo Soomaali Tanzanian ah.
56 ruux oo kale ayaa lagu dhaawacay weerarkaas oo lasoo afjaray saacadihii hore ee maanta.
wuxuu ahaa weerarkii ugu ciuslaa ee muddo sannado ah ka dhaca magaalada Kismaayo, oo xarun u ah maamul goboleedka Jubbalad, waxaana mas'uuliyaddiisa sheegatay xarakada Al-Shabaab oo gacan saar la leh ururka Al-Qaacida.
Jubbaland oo shaaciyay tirada dadkii ku dhintay qaraxa
MADAXTOOYADA JUBBALANDCopyright: MADAXTOOYADA JUBBALAND
Axmed Maxamed IslaamImage caption: Axmed Maxamed Islaam
Posted at 4:27 13 Jul4:27 13 Jul
Weeraka hoteelkii Kismaayo oo la soo gebagabeeyay
Ciidamada amniga Jubbaland ayaa sheegay in soo afjaray weerarka oo iyaga haatan gudaha u galeen hoteelka.
Ilaa haatan lama xaqiijin karo baaxadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi balse warar hordhac ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen halka dhaawac badan oo aan tiradiisa la xaqiijin la dhigay Isbitaalka maagaalada Kismaayo.
Qaraxa ayaa waxaa ku geeriyooday dad magac leh oo ay ka mid tahay Hodan Naaaleeye iyo seeygeeda Jaamac Fariid.
Weerarka ayaa waxaa uu biloowday 6-dii fiidnimo ee xalay kaasi oo ay mas'uuliyaddisa sheegteen ururka Al-Shabaab.
Posted at 19:53 12 Jul19:53 12 Jul
Madaxweynaha Jubbaland oo booqday isbitaalka Kismaayo
Madaxtooyada Jubbaland ayaa war kasoo saartay qarixii iyo weerarkii maanta ka dhacay hoteel ku yaala Kismaayo, sida hoose ayuuna u qornaa war saxaafadeedka.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa hada booqanaya Isbitaalka weyn ee Magaalada Kismaayo halkaas oo la geeyay dadkii ku dhaawacmay weerarka Argagixisadu maanta ku qaaday Hotelka Madiina ee Magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha ayaa booqday qaybta gargaarka deg dega ah oo shaqo adag ay ka hayaan Dhakhaatiirta kala duwan waxaa uu Madaxweynahu tacsi u diray dhamaan ehelada iyo qaraabada dadkii ku dhintay Qaraxa maanta isagoo caafimaad taam ah u rajeeyay dadka dhaawacyadu soo gaadheen.
Waxaa Madaxweynahu uu sheegay in Al-Shabaab ay ka go'antahay sidii shacabka Soomaaliyeed loo tirtiri lahaa taasna ay u marayaan wado walba.
Ciidamada amaanka ayuu Madaxweynahu ku amaanay sida ay uga jawaabeen weerarka waxaana uu xusay in ay soo badbaadiyeen dad farabadan kuwaas oo hotelka daganaa.
Madaxtooyadda JubbalandCopyright: Madaxtooyadda Jubbaland
Axmed Maxamed Islaam oo booqanaya isbitaalka KismaayoImage caption: Axmed Maxamed Islaam oo booqanaya isbitaalka Kismaayo
Posted at 19:46 12 Jul19:46 12 Jul
Qaraxa Kismaayo : Dad badan oo laga badbaadiyay hotel Cascaseey
Illo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa BBC-da u xaqiijiyay in badan laga badbaadiyay Hotel Cascaseey ee magaalada Kismaayo, halkaas oo ay weli gudaha ugu jiraan rag hubeysan oo xarakada Alshabaab sheegtay in ay iyaga ka tirsanyihiin.
Ciidamada ammaanka ayaa inta badan aslaaxiyay qolalka iyo qeybaha hoteelka, waxaae la sheegay in raga hubeysan ay ku jiraan qeyb sare oo qol shub ka samaysan ah oo uu hoteelka leeyahay.
Dadka lasoo badbaadiyay waxaa ka mid ah odayo dhaqameedyo magaalada u tagay hawlaha doorashada Jubbaland.
Maamulka Jubbaland weli kama uusan hadlin waxa dhacay, balse illo wareedyo ay BBC-da heleyso ayaa sheegaya in uu socdo shir guddiga amniga Jubbaland, kuwaas oo war kasoo saari doona weerarka.
Magaalada Kismaayo ayaa ahayd meesha ugu amniga badan guud ahaan Koonfurta Soomaaliya, waxaana aad u yaraa qaraxyada iyo dilalkii ka dhacayay qeybaha kale ee dalka.
Qof xog ogaal ah oo qariyay magaciisa ayaa BBC-da u sheegay in magaalada gudaheeda ay jireen illaa 15 bar koontarool oo ay ciidamada ku baaraan gaadiidka iyo dadkaba, sidaasi oo ay tahay ayuu gaariga qaraxa gaaray bartamaha magaalada, halkaas oo uu ku qarxay casar gaabadkii.
Posted at 19:34 12 Jul19:34 12 Jul
Dad weli warkooda la la’yahay
Dad kala duwan oo ehelada , saaxiibada iyo qaraabo la ah dad ku sugnaa hotel Cascaseey ee magaalada Kismaayo oo BBC-da lasoo xiriiray ayaa sheegay in ay la’yihiin dad ehelkooda ah.
Dadka la la’yahay waxaa ka mid ah Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo horey u ahaa xildhibaan iyo wasiir federal ah oo haddana ahaa musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Jubbaland.
Dad ehelkiisa ayaa sheegaya in uu taleefoonkiisa dansanyahay.
Waxaa jira dad kale oo weli raq iyo ruuxba lagu la’yahay.
Dad aad u tiro badan oo u tagay hawlaha doorashada ayaa ku sugnaa magaalada, hoteeladana waxa ay ahaayeen kuwa dad la ciirciiraya.
Mas'uuliyiin ururada bulshada rayidka oo magacooda ka gaabsaday ayaa BBC-da u sheegay in ay jiraan dad badan oo gidaarka hoteelka ka booday, lagana yaabo in iyaga iyo taleefoonadooda ay kala lumeen, berina ay si wanaagsan u kala caddaan doonto cidda maqan iyo cidda la heley,
Maxamed Ismaaciil Shuuriye, musharaxImage caption: Maxamed Ismaaciil Shuuriye, musharax
Posted at 19:00 12 Jul19:00 12 Jul
Saamaynta Qaraxa Kismaayo oo laga dareemay dhinacyada magaalada
Qaraxa maanta Kismaayo ka dhacay waxa uu ahaa mid aah u culus oo laga dareemay qeybaha kala duwan ee magaalada Kismaayo.
Muuqaal laga duubay garoonka kubbada cagta ee Waamo oo ka fog meesha uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinayay iyada oo lagu kala cararayo, iyo dad hanfariirsan.
Muuqaalka ayaa muujinaya uurada iyo qaaxa qaraxa oo uu muuqaalka meel fog ka qabtay.
Dad kala duwan oo magaalada ku sugan oo ay BBC la hadashay ayaa sheegay in guryaha ay ku ruxmeen, qaarkood uu saqafka wax gaaray.
Magaalada ayaa la ciirciireysa dad aad u badan oo magaalada u tagay arrimaha doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha Jubbaland, iyada dhammaan hoteelada ay buuxaan.
Baraha BulshadaCopyright: Baraha Bulshada
Garoonka waamoImage caption: Garoonka waamo
Qaraxa Kismaayo : Rasaasta oo weli ka dhex socota hotel Cascaseey
Rasaasta oo weli ka dhex socota hotel Cascaseey
Wararkii ugu dambeeyay ee kasoo baxaya weerar qarax iyo tacshiirad isugu jira oo casir gaabadkii maanta lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in weli la maqlayo rasaas ka dhacaysa gudaha hoteelka saacado kadib markii uu weerarka biloowday.
Ciidamada amniga ayaa la tacaalaya rag hubeysan oo ku jira gudaha hoteelka, waxaana jira warar ka hadlaya in ay jiraan dad halkaas weli ku xayiran oo aanan la garanaynin bad qabkooda.
Lama oga tirada rasmiga ah ee qasaaraha dhacay dhimasho iyo dhaawacba, sababtoo ah weli saraakiisha dowladda kama hadlayaan xaaladda.
Posted at 12:42 12 Jul12:42 12 Jul
Muqaallada muujinayo xasuuq ka dhacay Suudaan
BBC ayaa daboolka ka qaadday caddaymo muujinaya in weerar lagu qaaday dad banaanbaxayey saddexdii bishii June waddanka Sudan amarkaas oo kasoo baxay halka ugu sarraysa.
Barnaamijka BBC Africa eye ayaa daraasad ku sameeyey in ka badan 300 oo muuqaallo ah oo taleefoonno lagu qaaday magaalada Khartoum subaxnimadaas, ayagoo ka dibna isu geeyey oo halkaa ay ka soo baxday faahfaahin la xiriirta xasuuq lagu laayey tiro dad ah.
Ciidammada sida militariga u tababaran ee Suudaan RSF oo uu raacayay amar kasoo baxay golaha maamulka haya ee Suudaan ayaa xoog ku galay goobtii ay dibadbaxyaashu fadhiyeen isla markaasna rasaas ku furay shacabkii dibadbaxyada dhigayay.
Dadkii kasoo badbaaday dhibaatadaas ayaa waxay sheegeen in ciidammada RSF ay meydadka ku tureen webiga Nile.
BBC waxay la hadashay labo nin oo la sheegay inay katirsanayeen ciidammada sida militariga u tabbabaran ee RSF ee suudaan, waxay sheegeen inay qeyb ka ahaayeen ciidammadii weerarka ku qaaday dibadbaxyaasha.
Hoggaamiyeyaasha militariga Suudaan waxay beeniyeen inay ku lug lahaayeen xasuuqa balse waxay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen saraakiil khas wadayaal ah.
Posted at 11:52 12 Jul11:52 12 Jul
Isbaheysiga haya talada Itoobiya oo uu khilaafkoodu bannaanka usoo baxay
Xisbiga Dimuqraadiga ee Amxaarada ee ADP ayaa weerar afka ah ku qaaday xisbiga xoreynta Tigreega ee TPLF kaas oo uu sheegay inuu halis ku yahay mustaqbalka Isbaheysiga haya talada Itoobiya.
Xisbiga haya talada dalka Itoobiya ee (EPRDF) ayaa waxaa ku buhoobay ilaa afar xisbi oo ay kamid yihiin ADP iyo TPLF.
Arbacadii, xisbiga TPLF ayaa ku eedeeyay xisbiga Amxaarada inay la shaqeynayeen ciidammadii khaska waday isla markaasna ay carqaladeeynayaan amniga gobolka.
Waxay arrintani imaaneysaa xilli bishii hore isku day afgembi oo ka dhacay gobolka Amxaarada lagu dilay madaxweynihii gobolkaas Ambachew Mekonen iyo saraakiil sare.
“Xisbiga ADP waa inuu eegaa xaaladda cakiran ee ka taagan gudaha, ayna baaritaan ku sameeyaan dhacdadii lagu dilay saraakiisha iyo waa inay raalli bixiyaan” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay xisbiga TPLF.
Shalay, Xisbiga ADP waxaa uu sheegay in aysan wax raalligelin ah bixin doonin.
Marka ay timaaddo arrimaha amni darrada, xisbiga Amxaarada waxaa uu ku eedeeyaa inay lug ku leeyihiin xisbiga Tigreega.
“Waa ay na garab istaagi lahaayeen xilligii aan dhibaatada ku jirnay, xisbiga TPLF ma baddali doono siyaasadihiisa musuqa ah” ayaa lagu yiri qoraal xisbiga ADP uu kusoo qoray Facebook.
Khilaafkan soo kala dhexgalay saraakiisha ka tirsan isbaheysiga ka arrimiyo Itoobiya ayaa waxaa uu halis ku yahay midnimada iyo wadashaqeynta xisbigaas, sida uu BBC u sheegay qof falanqeeyo siyaasadda dalka Itoobiya.
Posted at 8:41 12 Jul8:41 12 Jul
Militariga Koonfur Afrika oo loo daadgureeyay magaalada Cape Town
Ciidammada qalabka sida ee dalka Koonfur Afrika ayaa loo daabulay deeganno ay rabshado ka dhaceen oo ku yaalla magaalada Cape Town.
Deeganadaas waxaa kamid ah Bonteheuwel, Delft, Hanover Park iyo Philippi East.
Warbaahinta maxalliga ayaa kusoo warrameysaa in rabshadaha ay sare u kaceen markii uu soo ifbaxay dagaallo u dhexeeyo kooxo burcad ah oo ku saleysan argoosi.
Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay rabshadaha ka dhacay Cape Town maalmihii lasoo dhaafay.
Xafiiska wasiirka qaabilsan booliska Bheki Cele ayaa sheegay in daadgureynta militariga ay tahay tallaabo lagu xoojinayo amniga magaalada.
“Waxaan tegin doonaa albaab kasta, waxaan soo uruurin doonaa qoryaha sida sharci darrada loo heysto” ayuu yiri Mr Cele oo la hadlayay warbaahinta gudaha.
Cape Town waxaa sannado badan ka taagnaa rabshahada ay u horseedaan buracadda, dowladdana waxay waddaa dadaallo ay ku xaqiijineyso amniga.
Posted at 8:01 12 Jul8:01 12 Jul
Qaramada Midoobey oo ku baaqday in xeryaha laga sii daayo muhaajiriinta ku sugan Libya
Dagaallo u dhexeeya ciidammo u hoggaaminayo Janaraal Khaliifa Haftar iyo dowladda ayaa ka socdaa LibyaImage caption: Dagaallo u dhexeeya ciidammo u hoggaaminayo Janaraal Khaliifa Haftar iyo dowladda ayaa ka socdaa Libya
Ha'yadda Qaramada Midoobey ee qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo Ha'yadda socdaalka adduunka ee IOM ayaa waxay ugu baaqeen mas'uuliyiinta dalka Libya inay sii daayaan muhaajiriinta lagu xeryaha ku yaalla dalkaas.
Waxay ha'yadahan ka codsadeen Midowga Yurub inay dib u bilaabaan howlgal dhanka biyaha oo laga sameynayo badda Mediterranean-ka sii loo soo badbaadiyo muhaajiriinta naftooda ku biimeynayaa halkaas.
Waxay sidoo kale sheegeen in 5,600 muhaajiriin ah lagu hayo xeryahaas, "Waa in xeryaha laga sii daaya iyadoo la dhowrayo badqabkooda ama waa in dalalka loo qaada si dib u dejin ay uga helaan"
Bayaanka kasoo baxay UNHCR iyo IOM ayaa kusoo beegmayaa xilli horraantii bishan weerar lagu qaaday xero ay ku sugnaayeen muhaajiriinta oo ku taalla duleedka magaalada Tripoli, halkaas oo ay ku dhinteen in kabadan 50 qof oo muhaajiriin ahaa.
Posted at 6:44 12 Jul6:44 12 Jul
Isku-day afgembi oo ka dhacay Suudaan
Militariga waxay sheegeen inay fashiliyeen isku dayga afgembiImage caption: Militariga waxay sheegeen inay fashiliyeen isku dayga afgembi
Afahayeen u hadlay militariga Suudaan, Janaraal Jamaal Cumar ayaa shaaca ka qaaday in tiro dad ah loo xiray isku dayga afgembi ee ka dhacay Suudaan, waxaana shakhsiyaadkaasi kamid ah saraakiil ciidammada katirsaneyd oo howlgab ah iyo kuwo horey uga ka tirsanaa sirddooonka iyo laamaha amniga Suudaan.
"Waxaan aragnay dad halis ku ah amniga iyo xasiloonida dalka, kuwaas oo ay kamid yihiin kooxo diiddan waxyaabaha ay doonayaan shacabka" ayuu yiri Janaraal Cumar.
Waxaa uu intaas ku daray in isku dayga afgembi looga gollahaa in lagu hor istaago heshiiskii awood qeybsiga ahaa ay dhawaan wada gaareen golaha sare ee militariga iyo Isbaheysiga mucaaradka.
Waa markii saddexaad uu isku day afgembi uu ka dhaca Suudaan oo ay sheegeen hoggaamiyeyaasha militariga inay fashiliyeen.
Posted at 6:42 12 Jul6:42 12 Jul
Waa Jimco taarikhda waxay ku beegan tahay 12-ka bisha Luulyo sannadka 2019-ka.
Posted at 13:09 11 Jul13:09 11 Jul
Farmaajo oo martiqaad ka heley Vladamir Putin
Madaxweyne Farmaajo iyo safiirka cusub ee Ruushka u fadhin doono SoomaaliyaImage caption: Madaxweyne Farmaajo iyo safiirka cusub ee Ruushka u fadhin doono Soomaaliya
Dowladda Ruushka ayaa markii ugu horeysay muddo dheer kadib safiir u magacaabatay Soomaaliya, kaas oo waraaqihiisa danjironimo uu ka guddoomay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
War kasoo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wixii hadda ka dambeeya uu Mudane Mikhail Golovanov yahay safiirka rasmiga ah ee Ruushka ku matala Soomaaliya.
Dhanka kale safiir ayaa warqad casuumaad ah ka waday madaxweynaha Ruushka, taas oo ah in Farmaajo uu booqasho ku tago dalkaas Ruushka, isaga oo ka qeybgalaya shirka Afrika iyo Ruushka eek a dhici doona magaalada Sochi.
Posted at 12:11 11 Jul12:11 11 Jul
Haweeney ku caan baxday la dagaalanka musuqa oo loo heysto eedeymo wax isdabo marin ah
Busisiwe Mkhwebane way beenisay eedeymaha loo heystoImage caption: Busisiwe Mkhwebane way beenisay eedeymaha loo heysto
Haweeney u dhalatay dalka Koonfur Afrika oo ku caan baxday la dagaalanka musuq maasuqa ayaa iyada lafteyda loo heysta eedeymo wax isdabo marin ah.
Saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Koonfur Afrika ayaa ku eedeeyay Busisiwe Mkhwebane in xafiiskeeda uu wado olole siyasaadeed oo aanan loo bogin si ay ugu eexato dadka mas’uuliyiinta musuq maasuqa lagu eedeeyay.
Waxaa ay sheegeen inay haweeneydan ay weerar ku qaaddo siyaasiyiinta daacadd ah si ay waddada ugu xaarto siyaasiyiinta musuq maasuqa loo heysta si ay awoodda dalka Koonfur Afrika u qabtaan.
Toddobaadkan ayay aheyd markii wasiir caan ka ah dalka Koonfur Afrika uu dacwad ka gudbiyay warbixin ay soo saartay haweeneyda u ololeysa ka hortagga musuq maasuqa.
Waxaa uu ku tilmaamay warbixinteeda mid sharic darro ah oo lagu beegsanayo isaga si ay u sameyso qorshe ay Koonfur Afrika ugu celineyso xilliggii muqddiga ahaa oo aysan dalka ka jirin kala dambeyn.
Balse Busisiwe Mkhwebane ayaa beenisay eedeymaha loo jeediyay.
Madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa isku dayaya inuu musuq maasuqa ka ciribtiro Koonfur Afrika kaas oo harreeyay dowladdii ka horreysay ee Jacob Zuma.
Posted at 8:51 11 Jul8:51 11 Jul
Iiraan oo isku dayday inay qabato markab uu leeyahay Ingiriiska
Markabka Ingiriiska ayaa ka hortaggay doomaha IiraanImage caption: Markabka Ingiriiska ayaa ka hortaggay doomaha Iiraan
Doomo laga leeyahay Iiraan ayaa isku dayay in isku hor gudbaan markab uu leeyahay Ingiriiska oo marayay meel u dhaw marin biyood ku yaalla Khaliijka ka hor inta uusan u soo gurman markabka dagaalka ee ciidammada badda Ingiriiska, sida ay sheegtay waasaraadda gaashaandhigga ee dalkaas.
Afahayeen wasaaradda gaashaandhigga Ingiriiska ayaa waxaa uu sheegay in tallabada ay qaaday Iiraan ay kasoo horjeedo shuruucda caalamiga.
Iiraan waxay ku hanjabtay inay gacanta ku dhigi doonto mid kamid ah maraakiibta Ingiriiska ee mara gacan biyoodkaas balse waxay beenisay inay sameysay isku day argoosi ah.
Doomahan la rumeysan yahay inay lahaayeen ciidammada ilaalada xeebaha ee Iiraan ayaa sameeyay isku day ay ku joojinayeen markabka Ingiriiska oo marayay gacan biyoodka Hormuz.
Xafiiska xiriirka ee ciidammada ilaalada xeebaha Iiraan ayaa beeniyay wararka sheegayo inay isku dayeen inay qabtaan markab uu leeyahay Ingiriiska.
"Ma jirin wax isku dhacyo ah oo aan la galnay Markab shisheeye sida Mid Ingriiska laga leeyahay" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay ciidammada ilaalada xeebaha Iiraan.
Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Javad Zarif waxaa uu sheegay in Ingiriiska uu wado warar uu ku abuurayo xiisad.
Posted at 6:53 11 Jul6:53 11 Jul
Madaxweynaha Nigeria oo xulka qaranka ku tilmaamay 'koox aanan la loodin karin'
Madaxweynaha Nigeria, Muhammadu Buhari ayaa ammaanay guusha ay gaareen xulka qaranka Nigeria isla markaasna ku tilmaamay kuwo aanan laga adkaan karin.
Waxaa uu sheegay in dhammaan shacabka dalkiisa ay ka dhuur sugayaan natiijada ay xulka qaranka kasoo hoyiyaan Koobka Qaramada Afrika ee hadda ka socda dalka Masar.
Xulka Nigeria ayaa Koonfur Afrika kaga badiyay 2-1, waxay Nigeria ugu gudubtay ciyaarta nus dhammaadka ee Koobka Qaramada Afrika.
Goolasha waxaa xulka Nigeria uu kala dhaliyay William Troost-Ekong iyo Samuel Chukwueze.
Nigeria waxay Axadda la dheeli doontaa kooxaha usoo gudba ciyaaraha nus dhammaadka gaar ahaan xulalka Ivory Coast iyo Algeria oo ay ku xiran tahay midka soo baxa.
Senegal waxay 1-0 kaga badisay xulka Benin, sidaas ayay ugu gudubtay nus dhammaadka.